ဗက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွါး၍ နာဇရက်မြို့၌ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားသောဘ၀ဖြင့်၊နေခဲ့သော သခင်ခရစ်တော်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ၊ ပရောဖက်ဖြစ်ပါသည်။
၂၄။ “ထိုသူကို သေခြင်းဝေဒနာသည် အစဉ်ချည်နှောင်ချုပ်ကိုင်၍မဖြစ်နိုင်သည်နှင့်၊ ထိုဝေဒနာကိုဘုရားသခင်သည် ချွတ်ပယ်၍ ထမြောက်စေတော်မူပြီ။” (တ ၂း၂၄)
မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိ၊ ရှုပ်ထွေးခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းရောင်မရှိသော အလွန်တိုတောင်းသောကာလသည်၊ သဘာဝကြောင့်ဖြစ်သော အံ့ဘွယ်များဖြင့်ပြည့်နေလျှင် ဘုရားသခင် အာရုံစိုက်ပေးပါမှ၊ အချို့အချိန်တွင် သစ္စာရှိခြင်း ဖြင့် “ဘုရားသခင် ဤနေရာတွင် အစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားသော စီမံကိန်းများရှိပါသလား”? သို့မဟုတ် “ကျွန်တော် ဘာဖြစ်ဘို့ရှိ သည်ကိုအသိတရားရပါသလား။”?
ကျွန်ုပ်တို့သည်၊ “ဘုရားသခင်ကို” ယုံကြည်၍ လိုအပ်သည့်အခါ ဖက်တွယ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့က အကြောင်းအရာများသည် မကောင်းသော၊အရာများဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်သည်၊ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေသည်။ “ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က သေစေမည့် ကြိုးကို ဖြုတ်၍ ပြန်လည်အသက်ရှင်စေသည်။
တခါတရံ ကျွန်တော်၏လွတ်မြောက်ခြင်းသည် ချက်ခြင်း “ဘုရားသခင်က” အပြီး။ တခါတရံ တစ်နှစ် စော၍ ဘုရားသခင် ရေးသည့် ကျွန်တော်၏အသက်တာ နှင့် စာကြောင်း၏နောက်ဆုံးကိုမမြင်ရခင်။
ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်၏ပုံပြင်ကို ပြစ်ပယ်သည်ဟုအဓိပ္ပါယ်မရပါ။
ဘုရားသခင်က “ဘုရားသခင်က”ဆိုသည်အချိန်မရောက်ခင်ကအချိန်ကိုအသုံးပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်၇န်။ လွတ်လပ်သောအချုပ်အခြာအာဏဖြင့်၊ ကျိန်းသေရန်။ ဘရားသခင်၏ဂရုဏာတော်ဖြင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မာသော ဖိအားကိုအဖက်တိုင်းမှပေး၊သည်၊ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က၊ ကျွန်ုပ်တို့ တည်ရှိခြင်းကို ပြင်းထန်စွာချေခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသခြင်းများမှ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကြီးကျယ်နက်ရှိုင်းသည်၊ မြေကြီးတွင်း၊ မျော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့ခြင်းမှ အပေါ်သို့ဆွဲတင်ပေးသည်။ ဘာသာရေးအရ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က ရပ်တည်ပေးသည်။ ထိုးနက်သည်၊ မြေပေါ်သို့လဲကျသည်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ဖျက်၍မရသော၊ အကြမ်းခံနိုင်ရန်၊ ဖျက်စီး၍မရသော ၀ိညာဉ်တမ်ခိုးဖြည့်စီးပေးထားသည်။ (၂ ကော ၄)
အချိန်တိုင်းတွင် ဘုရားသခင်၏ ဤနေရာ၌ စီမံချက် အလွန်တိုတောင်းသော ကာလ၊ ကိုတွေ့မည်။ ကျွန်တော်တို့ သိရမည်။ “ဘုရားသခင်က” အနီး တိုတောင်းသေကာလမှာရှိသောကြောင့်။ ကျွန်တော်တို့၏ပုံပြင်ကိုဖြန့်ထုတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သည်။ သူ၏ကောင်းသော ကျွန်တော်အတွက်စီမ့ချက်။ (ယေရမိ ၂၉၊ ရော ၈း၂၈)
ကျွန်တော်တို့စောင့် နေသဖြင့်၊ သခင်ယေရှုက ပြောင်းလဲစေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သူဘာပေးမည်ကိုမသိနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့သိရတာက ပုံပြင်ဘယ်လိုပြီးမည်မသိ၊ အရေးမကြီးပါ။ ပါဝင်သည့်စကားစုက “ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏ကျောက်၊ ငါ၏မြို့ရိုး၊ ငါကိုကယ်လွှတ်သောသခင်၊” (၂ရာ ၂၂း၂)